၁၁:၄၅၊ ၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ CRPH ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (Alias) စာတွဲ: ပြန်ညွှန်းအသစ်
၁၆:၁၄၊ ၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ CPRH ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (Alias) စာတွဲ: ပြန်ညွှန်းအသစ်
၁၆:၁၂၊ ၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီ ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားပြုကော်မတီ)
၀၈:၄၉၊ ၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၁ Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ အာဏာဖီဆန်ရေး ပြည်သူ့လှုပ်ရှားမှု ဥပမာများ ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (Content in this edit is translated from the existing English Wikipedia article at en:Examples of civil disobedience; see its history for attribution.)
၁၀:၃၇၊ ၁၉ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁ Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ တမ်းပလိတ်:PD-notice ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (Ported in en:Template:PD-notice Ver: 17:02, 23 February 2018‎; see its history for attribution.)
၁၀:၂၉၊ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ တမ်းပလိတ်:Infobox drug/maintenance categories ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (Ported in en:Template:Infobox drug/maintenance categories Ver: 09:03, 18 November 2020‎; see its history for attribution.)
၁၀:၂၈၊ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ တမ်းပလိတ်:Infobox drug/formatCompTox ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (Ported in en:Template:Infobox drug/formatCompTox Ver: 19:57, 27 April 2019‎; see its history for attribution.)
၁၀:၂၇၊ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ တမ်းပလိတ်:Infobox drug/formatPDBligand ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (Ported in en:Template:Infobox drug/formatPDBligand Ver: 11:08, 27 October 2020‎; see its history for attribution.)
၁၀:၂၆၊ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ တမ်းပလိတ်:Infobox drug/formatChemDBNIAID ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (Ported in en:Template:Infobox drug/formatChemDBNIAID Ver: 16:30, 23 February 2018‎; see its history for attribution.)
၁၀:၂၅၊ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ တမ်းပလိတ်:Infobox drug/formatChEMBL ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (Ported in en:Template:Infobox drug/formatChEMBL Ver: 04:12, 23 November 2018‎; see its history for attribution.)
၁၀:၂၄၊ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ တမ်းပလိတ်:Infobox drug/formatChEBI ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (Ported in en:Template:Infobox drug/formatChEBI Ver: 05:41, 23 November 2018‎; see its history for attribution.)
၁၀:၂၃၊ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ တမ်းပလိတ်:Infobox drug/formatKEGG ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (Ported in en:Template:Infobox drug/formatKEGG Ver: 09:34, 12 April 2020‎; see its history for attribution.)
၁၀:၁၀၊ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ တမ်းပလိတ်:Infobox drug/formatUNII ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (Ported in en:Template:Infobox drug/formatUNII Ver: 00:27, 18 December 2020‎; see its history for attribution.)
၁၀:၀၉၊ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ တမ်းပလိတ်:Infobox drug/formatChemSpider ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (Ported in en:Template:Infobox drug/formatChemSpider Ver: 02:12, 23 November 2018‎; see its history for attribution.)
၁၀:၀၈၊ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ တမ်းပလိတ်:Infobox drug/formatDrugBank ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (Ported in en:Template:Infobox drug/formatDrugBank Ver: 04:01, 23 November 2018‎; see its history for attribution.)
၁၀:၀၆၊ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ တမ်းပလိတ်:Infobox drug/formatIUPHARBPS ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (Ported in en:Template:Infobox drug/formatIUPHARBPS Ver: 03:49, 23 November 2018‎; see its history for attribution.)
၁၀:၀၅၊ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ တမ်းပလိတ်:Infobox drug/formatJmol ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (Ported in en:Template:Infobox drug/formatJmol Ver: 17:28, 06 December 2019‎; see its history for attribution.)
၁၀:၀၄၊ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ တမ်းပလိတ်:Infobox drug/chemical formula ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (Alias) စာတွဲ: ပြန်ညွှန်းအသစ်
၁၀:၀၁၊ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ တမ်းပလိတ်:Infobox drug/formatPubChemSID ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (Ported in en:Template:Infobox drug/formatPubChemSID Ver: 16:29, 23 February 2018‎; see its history for attribution.)
၁၀:၀၀၊ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ တမ်းပလိတ်:Infobox drug/formatPubChemCID ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (Ported in en:Template:Infobox drug/formatPubChemCID Ver: 03:29, 23 November 2018‎; see its history for attribution.)
၀၉:၅၉၊ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ တမ်းပလိတ်:Infobox drug/formatCASnumber ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (Ported in en:Template:Infobox drug/formatCASnumber Ver: 16:30, 23 February 2018‎; see its history for attribution.)
၀၉:၅၇၊ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ တမ်းပလိတ်:Infobox drug/legal status ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (Ported in en:Template:Infobox drug/legal status Ver: 01:05, 20 May 2020‎; see its history for attribution.)
၀၉:၅၄၊ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ တမ်းပလိတ်:Infobox drug/formatATC ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (Ported in en:Template:Infobox drug/formatATC Ver: 12:03, 18 April 2017‎; see its history for attribution.)
၀၉:၅၃၊ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ တမ်းပလိတ်:Infobox drug/pregnancy category ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (Ported in en:Template:Infobox drug/pregnancy category Ver: 20:16, 20 August 2020‎; see its history for attribution.)
၀၉:၅၀၊ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ တမ်းပလိတ်:Infobox drug/title ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (Ported in en:Template:Infobox drug/title Ver: 16:30, 23 February 2018‎; see its history for attribution.)
၀၉:၄၇၊ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ တမ်းပလိတ်:Infobox drug/licence ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (Ported in en:Template:Infobox drug/licence Ver: 16:29, 23 February 2018‎; see its history for attribution.)
၀၉:၂၀၊ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ တိုဇင်နမရန်း ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (Content in this edit is translated from the existing Wikipedia article at en:Tozinameran; see its history for attribution.)
၀၆:၃၉၊ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ BioNTech ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (Alias) စာတွဲ: ပြန်ညွှန်းအသစ်
၀၆:၃၃၊ ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ ဘိုင်ယွန်တက်ခ် ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (Content in this edit is translated from the existing Wikipedia article at en:BioNTech; see its history for attribution.)
၁၇:၅၀၊ ၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ Özlem Türeci ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (Alias) စာတွဲ: ပြန်ညွှန်းအသစ်
၁၇:၄၆၊ ၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ အော့ဇလဲမ် တူရီးစီ ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (Content in this edit is translated from the existing Wikipedia article at en:Özlem Türeci; see its history for attribution.)
၁၇:၄၄၊ ၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ Ugur Sahin ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (Alias) စာတွဲ: ပြန်ညွှန်းအသစ်
၁၇:၄၃၊ ၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ Uğur Şahin ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (Alias) စာတွဲ: ပြန်ညွှန်းအသစ်
၁၇:၃၈၊ ၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ အူဂါဇာဟီးန် ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (Content in this edit is translated from the existing Wikipedia article at en:Uğur Şahin; see its history for attribution.)
၀၉:၅၅၊ ၂၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ တောင်အာရှ ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (Content in this edit is translated from the existing Wikipedia article at en:Sourth Asia; see its history for attribution.)
၀၅:၃၇၊ ၂၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ တမ်းပလိတ်:Taxonomy/Millingtonia ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (Ported in en:Template:Taxonomy/Millingtonia Ver: 01:40, 27 May 2020‎; see its history for attribution.)
၀၅:၃၆၊ ၂၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ တမ်းပလိတ်:Taxonomy/Oroxyleae ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (Ported in en:Template:Taxonomy/Oroxyleae Ver: 01:38, 27 May 2020‎; see its history for attribution.)
၀၅:၃၅၊ ၂၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ တမ်းပလိတ်:Taxonomy/Bignoniaceae ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (Ported in en:Template:Taxonomy/Bignoniaceae Ver: 23:48, 14 November 2017‎; see its history for attribution.)
၁၇:၁၄၊ ၂၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ RCEP ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (Alias) စာတွဲ: ပြန်ညွှန်းအသစ်
၀၅:၁၂၊ ၁၈ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ အာရ်စီအီးပီ ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (Content in this edit is translated from the existing Wikipedia article at en:Regional Comprehensive Economic Partnership; see its history for attribution.)
၁၆:၄၉၊ ၁၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ Man-month ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (Alias) စာတွဲ: ပြန်ညွှန်းအသစ်
၁၅:၅၈၊ ၁၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ Man-hour ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (Alias) စာတွဲ: ပြန်ညွှန်းအသစ်
၁၅:၅၇၊ ၁၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ လူ-နာရီ ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (Content in this edit is translated from the existing Wikipedia article at en:Man-hour; see its history for attribution.)
၀၁:၀၇၊ ၁၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ တမ်းပလိတ်:IPA soundbox ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (Ported in en:Template:IPA soundbox Ver: 23:22, 30 December 2019‎; see its history for attribution.)
၀၀:၄၆၊ ၁၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ တမ်းပလိတ်:Transform ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (Ported in en:Template:Transform Ver: 07:49, 07 December 2018‎; see its history for attribution.)
၀၀:၄၄၊ ၁၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ မော်ဂျူး:IPA symbol/data ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (Ported in en:module:IPA symbol/data Ver: 12:15, 22 October 2020‎; see its history for attribution.)
၀၀:၄၁၊ ၁၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုး က စာမျက်နှာ မော်ဂျူး:IPA symbol ကို ဖန်တီးခဲ့သည် (Ported in en:module:IPA symbol Ver: 17:11, 27 January 2020‎; see its history for attribution.)
၁၆:၄၅၊ ၁၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ အလက်စကာပြည်နယ်၏ လူမှုပထဝီ စာမျက်နှာကို အလက်စကာပြည်နယ်၏ လူမှုစာရင်းအင်း သို့ Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုးက ရွှေ့ခဲ့သည်
၁၆:၄၅၊ ၁၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ ဆွေးနွေးချက်:အလက်စကာပြည်နယ်၏ လူမှုပထဝီ စာမျက်နှာကို ဆွေးနွေးချက်:အလက်စကာပြည်နယ်၏ လူမှုစာရင်းအင်း သို့ Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုးက ရွှေ့ခဲ့သည်
၁၆:၀၅၊ ၁၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၀ ဟင်းနုနွယ် စာမျက်နှာကို ဟင်းနုနယ် (ဘလိုက်တမ်မျိုးစိတ်) သို့ Dhawell.hlugalay ဆွေးနွေး ပံ့ပိုးက ရွှေ့ခဲ့သည်
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:မှတ်တမ်း/Dhawell.hlugalay" မှ ရယူရန်